Sidee loo ogaadaa ereyga sirta ee pdf file - Geofumadas
Sida loo ogaado ereyga 'pdf file'
Oktoobar, 2011 Internet iyo Blogs, dhowr
Waxaa dhici karta in aanu u yeelaan password a in file pdf ah iyo ugu danbeyn aan illoobin, ama ku kale oo aad u daran, dadka u shaqeeya hay'ad iyo iyada soo gelin la password a in ugu danbeyn uu lumo. Iyada oo lacag la shaqeeya oo aan sirta ah, waxaad waayi waxa uu noqonayaa mid ku dhowaad sida wax walba oo laga badiyay haddii aynaan ka heli ha baxay kuwaasoo samayn jiray shuqulkii, wax badan ka yar haddii ay ahayd sannado badan ka hor oo waa hilmaameen wakhtigaas loo isticmaalo magaca dhexe aroosadda.
Waqtigan waxaan ku tusi doonaa laba foom, inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah taas oo la mid ah tan oo aan lahaa khibrado wanaagsan.
1. Isticmaalidda Furaha Furaha PDF
PDF Furaha Furaha v3.1 waa codsi ah in qiyaastii $ 30 waxaan xalin ku dhawaad ​​waxa aan u baahan nahay. version maxkamadda kuu ogolaanaysaa noo shaqeeyaan tiro kooban oo files, ka dibna na weydiiyo si ay u iibsadaan liisanka, si ay u soo bixi laakiin waa inaad u gab antivirus maxaa yeelay, haddii aan mid ka mid qatar ah ka fiirsan doonaa goobta in ay weerar toos ah eedeysanuhu.
Waxa barnaamijkani sameeyo wuu furan yahay feylka, tirtiraa furaha ereyga ah oo na weydiiso inaan diiwaangelino meel kale meel aan meel difaac lahayn. Dhibaatada barnaamijkan ayaa ah in ay dib u furi karto furaha erayga "Mulkiilaha", si kastaba ha ahaatee waxaa jira nooc kale"user"in nuqulkan aan sameyn karin, sida XueHeng uu noo sheegay, waxay rajaynayaan in ay hawshaan ku dhejiyaan qaybta Pro ee soo socda.
Haddii faylka uu haysto lambarka sirta ah ee nooca ah, waxaa lagu weydiin doonaa inaan soo galno oo haddii aanan ogeyn, waxay kor u qaadeysaa fariinta:
"Passwordku sax maaha".
2 Isticmaalida Crackpdf
Kani waa codsi Linux ah oo qeybintiisa laga soo dejisan karo boggan:
waxaa jira kuwa ku soo qoray Windows, oo leh maktabadda xijinka1.dll ee aan ku iman sawirka asalka ah waxaana laga soo qaadan karaa cinwaankani
Faylka waa la ciribtiray, maaddaama ay tahay in laga fuliyo xariijin taliseed waxaa habboon in la dhigo meel u dhow buugga asaasiga ah. Xaaladdan oo kale ayaan ku kaydiyay feylka magaca "pdff", Waxaan sidoo kale badbaadiyey faylka la ilaaliyay ee isku midka leh magaca sample.pdf. Si aad u maamusho waxaan u tagnaa DOS kombuyuutarka qaanuunkana xusuusnow qaar ka mid ah amarradii hore ee aan hore u soo baranay:
Tan waxaa lagu sameeyaa Windows: Start> Run> cmd. Markaad galeyso, waa in aan aragnaa qadiyada madow ee taariikhda madow.
Hadda, waxaan u guureynaa liiska danaha noo ah:
Wax kasta oo aan ku jirno, waa inaan qornaa: cd .. markaa waan sameynaa geli. Waxaanu samaynaa wakhti badan illaa inta aan ka helno buuga asaasiga ah C: \_>
Si aad u gashid liistada danaha noo, waxaan qoraynaa: Cd pdff. Iyada oo arrintani ay tahay in qunsulku yahay: C: \_ dff>
Hadda, waxaannu fulin amarka: pdfcrack -f sample.pdf. Tani waxay keeni doontaa geeddi-socodka si uu u bilaabo wareegga raadinta ee furaha suurtogalka ah, oo la mid ah waxa aan ku aragno sawirka. Iyada oo ku xiran murugada furaha, raadintu waxay qaadan kartaa dhowr saacadood, ficilkana waa laga tegi karaa -wuxuu noqon karaa habeenkii oo dhan- ilaa ugu dambeyn waxaan arki doonaa fariin sida kan muuqaalka ugu hooseeya: helay user-password: 'furaha aan raadineyno'.
Jadwalka ayaa u muuqda mid fudud, laakiin wuxuu leeyahay fursado badan, sida:
-w oo adiga lagu siin karo liiska furaha suurtogalka ah ee faylka
-waxaa kaliya oo aan raadsanayaa lambarka sirta ah, tani waa tan qaldan, markaa uma baahnin inaan qoro
-o si aad u raadisid ereyga sirta ah
-M in la joojiyo marka uu gaaro tiro gaar ah oo jilayaal ah
-waa inuusan raadin ereyada leh astaamo yar
Post Previous«Previous Isku Dayay 2011 Finalka
Post Next Haddii Geofumadas haysto akhristayaasha 100Next »
Hal Jawaab "Sida loo ogaado garashada sirta ee faylka pdf"
Thanks !! Tani waa hab wanaagsan. Waxaan kugula talinayaa inaad adeegsato barnaamijka soo-kabashada erayga sirta ah dheeriga ah ee habkan. Software-kani wuxuu ka heli karaa lambarka sirta ah ee faylka loo yaqaan 'PDF encryption'. Pasprog hilmaansiiyay eraygaaga sirta ah ee PDF https://pasprog.com/forgotten-pdf-password.php